Tatoo igwe Manufacturers, Suppliers - China igbu Machine Factory
K2 mgbanwe attdị Cartridge Machine
German coreless moto 25x22mm Rotational Speed: 12V 11000rpm Torque: 420g Ndenye Nkọwa Njirimara: Na-adịgide Adịgide: attdị Egbe Gundị: uminumdị Egwuregwu Aluminium: Ebe Eletriki Mmalite: Zhejiang, China Ahịa aha: K2 Nọmba Nlereanya: MDJ-166 Aha ngwaahịa: K2 Revolution Cartridge Machine Interface: RCA Motor: Germany Coreless Motor 25x22mm Speed: 12V 11000rpm Kemeghi Mkpa Ogologo: 0.1-4mm Mbukota: 1pc / igbe Ibu: 0.6kg Agba: Pink, Black, Gold Advantage: Anụ ojiji maka: igbu Olee otú m ịtụ sample ...
German coreless moto Rotational Speed: 12V 11000rpm 480 big torque AIR FREIGHT: bestzọ kachasị mma iji ụgbọ mmiri buru ibu buru ibu (karịa 100kg) ma ọ bụ mgbe usoro iheomume gị enweghị ike ichere maka ibu mmiri. Ọnụego ikuku na-adabere na ibu na olu. Fọdụ ihe dị ka ụfụfụ na-ewe ọtụtụ ohere mana ọ na-adịcha mfe ma ụfọdụ ihe dịka iron dị arọ nke ukwuu mana ọ na-ewe obere ohere. Ọnụ ego nke ịrụ ọrụ n'ezie na-ebu ibu na olu ma na-echebara ya echiche. Na mkpokọta, oge na-agabiga agafeghị 10 na-arụ ọrụ d ...
IPHISE Tattoo Cartridge igwe
Lessgba ọsọ na-enweghị isi: 9000rpm Mgbatị Mkpa Ogologo: 0 - 3.5mm 1. Moto na-enweghị isi, ọsọ nke 12/9000 na-emesi obi ike na akụrụngwa ahụ, ike dị ike: 2. Mbibi akpụkpọ anụ dị ala, obere mkpọtụ, agba agba ngwa ngwa, ọ dịghị ọrụ ọkụ n'etiti! Ozu mere nke aluminom onu; ọ bụ nkenke arụ ọrụ site na CNC akụrụngwa akụrụngwa ise iji hụ na izu oke nke ahụ na nkenke nha! 3. Elu enyo ka enyo ji enwu enwu na anodized ...
Net arọ: otu igwe: 85g oké njọ: 170g Size: Single igwe: 50x52x33mm (tinyere mkpanaka ogologo 91mm) MKpọnwụ: Oke agịga mmepụta 4mm mbukota: elu na ala mkpuchi igbe Agba: 7 agba-acha ọbara ọbara-acha anụnụ anụnụ-gold-ọlaọcha-pink- -acha odo odo-green Nhazi ndepụta: igwe * 1 thimble mkpara * 2 obere ngwa ngwugwu * 1 Nhọrọ: aka na waya Parameters: 1. Interface: RCA interface 2. Ihe: Aluminom alloy 3. Usoro: CNC Integrated nkenke nkenke 4. Motor: Coreless moto 5. Malite voltaji: 4-5v ...
Alien Tatoo Cartridge Machine (Coreless Motor)
Net nha: otu igwe: 74g gbakwunyere njikwa: 170g Nnukwu ibu: otu igwe: 170g tinyere njikwa: 280g Size: Ngwa igwe: 35 * 63 * 110 (ogologo osisi) mm tinyere aka: 133 * 35mm Nha njikwa: 83.8 * 30.5mm Mbukota: igbe mkpuchi ala na nke ala Agba: 6 agba ojii-acha ọbara ọbara-ọla edo-acha odo odo-ọlaọcha isi awọ-champeenu Nhazi ndepụta: igwe * 1 nnyefe mkpanaka * 3 obere ngwa ngwugwu * 1 njikwa (nhọrọ) Parameters: Interface: RCA interface 2. Ihe: Aluminom alloy 3. Nka: CNC ike nkenke nkenke 4 ...
KingKong 2 igbu Cartridge Machine
Motor: USA Coreless Motor Rotational Speed: 12000rpm Kemeghi Mkpa Mkpa Ogologo: 0.1 - 4mm DC njikọ, oké conductivity. Oke ọsọ na ike siri ike, dị elu nke ọma. Ike, ọ bụghị ikpo ọkụ mgbe ọ gachara awa 8. Obere ụzụ, na-enye ebe dị jụụ maka ndị na-ese egbugbu na ndị ahịa. Kedu ka ọnụahịa si arụ ọrụ? Ka ị na - enye iwu ọnụahịa ole ị ga - enweta. Nke a bụ eziokwu karịsịa maka ngwaahịa OEM / ODM n'ihi na emere ha naanị maka gị. All nke mmepe, chepụta ihe ...
Nnukwu Ogo 9V 12000rpm Tattoo Machine DC Interface Germany Faulhaber Motor Shell Tattoo Rotary Machine Nkọwa: Igwe ahụ nwere oghere nke aluminom alloy mepụtara okpokolo agba na isi iyi ọkụ LED mgbe arụ ọrụ na nke nwere ike iwepụ, ndị na-agbanwe agbanwe n'akụkụ na mkpuchi cam. Igwe a na-ejikwa ihe eji eme ọhụụ ọhụụ ọhụụ nwere akara atọ na-agba agba - nro, ọkara na ike. Ihe ndi ozo gunyere enweghi uche polarity na enweghị mbido mbido. The igwe nwere a billet al ...